PSJTV | किन भएकाे थियाे प्रधानमन्त्रीको उडान २२ मिनेट ढिलो ?
किन भएकाे थियाे प्रधानमन्त्रीको उडान २२ मिनेट ढिलो ?
काठमाडौँ : भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चार्टर उडान बिहीबार २२ मिनेट ढिलो भएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको न्यारोबडी विमान एयरबस ३२० भियतनामको हनोईतर्फ उड्ने तालिका बिहान ११:२५ मा थियो । त्यसअघि भुटानको पारोका लागि उडेेको ड्रयुक एयरले आपतकालीन अवतरण गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको उडानको समय धकेलिएको थियो ।
'ड्रयुकको उडिरहेको विमानको ककपिटभित्र एक्कासि धूवाँ देखिएपछि पाइलटले आपतकालीन अवतरण गर्नुपर्ने भयो,' विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षत्रीले भने, 'त्यसका लागि धावनमार्ग खाली गराउनुपर्‍यो ।' महाप्रबन्धकका अनुसार उक्त विमानमा ४२ यात्रु थिए । चालकले उक्त विमान सुरक्षित रूपमा काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गराएका थिए ।
'काठमाडौंबाट ६० माइल पर पुगिसकेको विमान फेरि फर्केर आउँदा प्रधानमन्त्रीको चार्टर उडानको समय धकेलिन पुग्यो,' महाप्रबन्धक क्षत्रीले भने । उक्त जहाज अवतरण भइसकेपछि निगमको आरए जिरो-जिरो-थ्री उडान नम्बरको भीभीआईपी जहाज भियतनामका लागि उडेको थियो । उक्त विमान २ घण्टा ५० मिनेटमा हनोई पुगेर बिहीबारै काठमाडौं फर्किएको छ । ड्रयुकको विमान भने शुक्रबार बिहान मात्रै भुटान फर्किने तालिका छ ।
प्रधानमन्त्री सवार हुने भएकाले विमानस्थलले नोटाम जारी गरेको थियो । नोटामको समयभन्दा आधा घण्टा हाराहारी अघिपछिका लागि अन्य कमर्सियल उडानलाई सार्ने प्रचलन छ । तर, उडिरहेको कुनै पनि विमानले आपतकालीन अवतरणको माग गर्दा भीभीआईपी उडानको समय पनि प्रभावित हुन्छ ।